BQ ga-emelite ekwentị 10 na gam akporo 9.0 achịcha | Gam akporosis
10 BQ igwe ga-emelite na Android 9.0 achịcha
Eder Ferreño | | Bq, Gam akporo nsụgharị
Emere Android 9.0 achịcha ụbọchị ole na ole gara aga, na-atụghị anya ya. Versiondị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ ga-amalite na-abịa n'oge na-adịghị anya na ụdị ọhụrụ, mgbe emelitere Google Pixels. Ugbu a, ọ bụ oge nke ụdị ịkpọsa ụdị nke ha ga-enwe ike imelite. Nke a bụ ihe gbasara BQ, nke gosipụtarala ekwentị nke ha ga-emelite.
The Spanish ika na-eji nke gam akporo One na ụfọdụ nke ya ụdị. Ya mere, a na-atụ anya na enwere ekwentị ga-enwe ike imelite gam akporo 9.0 achịcha ozugbo enwere ike. Thelọ ọrụ ahụ ekpughelarị ndepụta ekwentị. Ma ọ bụghị ụbọchị.
N'oge a ha na-akpọsa ngụkọta nke ekwentị 10 ndị ga-esote inweta mmelite ahụ. Ajụjụ ahụ ka ga-abụ ma ha ga-abụ ndị mbụ ma ọ bụ na ọ bụ naanị ha ga-enweta mmelite a. Anyị ga-echere maka ozi ndị ọzọ sitere na BQ n'onwe ya.
Maka ugbu a, anyị ga-ahapụrụ gị mbụ na Ndepụta zuru ezu nke ekwentị ndị BQ egosiworị:
Aquaris X2 na Aquaris X2 Pro (Moddị na gam akporo Otu)
Aquaris X na Aquaris X Pro
Aquaris U2 na Aquaris U2 Lite
Aquaris VS na Aquaris VS gbakwunyere
Aquaris V na Aquaris nke V
Tendị iri a bụ ndị ga-enweta Android 9.0 Pie na eze. Ihe a na - amaghi ugbu a bụ ụbọchị nke mmelite ahụ ga - abata. Elsdị na gam akporo onye a na-atụ anya ịbụ ndị izizi emelitere. Ọ bụ ezie na anyị ga-echere maka data ndị ọzọ na nke a.
Ikekwe mgbe a hapụrụ gam akporo 9.0 achịcha, BQ hapụkwuru ozi gbasara mmelite a. Ya mere, anyị ga-echere obere oge ruo mgbe anyị ga-ama nkọwa ndị ọzọ n'ụzọ doro anya. Anyị ga-ege ntị na ihe ụlọ ọrụ Spanish na-ekwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » 10 BQ igwe ga-emelite na Android 9.0 achịcha
Xiaomi Mi 8X maka asambodo 3C, ụdị atọ dị iche iche na-apụta
Leaked 5 nkeji nke Fortnite gameplay na gam akporo